Ny lova Tokyo Tokyo 2020 dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny fizahan-tany Japoney
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Ny lova Tokyo Tokyo 2020 dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny fizahan-tany Japoney
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Japon • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Sports • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny lafiny tsara amin'ny lova fizahantany ao Tokyo 2020 dia tsy hanolotra fanarenana haingana ny habetsaky ny fampiasam-bola ho very satria tsy misy fitsidihana iraisam-pirenena sy voafetra ny fitsidihana ao an-trano.
Tokyo 2020 dia manolotra tombony ho an'i Japana amin'ny fotoana maharitra.
Tokyo 2020 dia hanampy ny firenena amin'ny famoronana vokatra fizahan-tany matanjaka sy miovaova ho an'ny taona ho avy.
I Japon dia eo amin'ny toerana voalohany hisambotra ny fangatahana ao an-toerana sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena rehefa vita ny Lalao Olaimpika.
Betsaka no hahita Tokyo 2020ny lova ara-fizahan-tany ho ratsy be dia be, noho izy nitranga nandritra ny areti-mandringana sy ny voka-dratsin'izany. Na izany aza, misy ny lafy tsara mbola azo sintonina rehefa mijery ny ho avin'ny fizahan-tany Japoney.
Ny lafiny tsara amin'ny lova fizahantany ao Tokyo 2020 dia tsy hanolotra fanarenana haingana ny habetsaky ny fampiasam-bola ho very satria tsy misy fitsidihana iraisam-pirenena sy voafetra ny fitsidihana ao an-trano. Na izany aza, manolotra tombony ho an'i Japana amin'ny fotoana maharitra izy io, ary hanampy ny firenena amin'ny famoronana vokatra fizahan-tany matanjaka sy miovaova ho an'ny taona ho avy.
Ny fotodrafitrasa vaovao mifandraika amin'ny fizahantany dia hampitombo ny vokatra, ny fahaiza-manao ary ny fisarihana
Ny rohy fitaterana nohatsaraina ho an'ny Lalao Olaimpika, toy ny Station Yamanote Line vaovao any Tokyo, dia hampihena ny fitohanan'ny mponina Japoney ary hanampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny dia an-trano mandroso, hamorona fitomboan'ny fahaizan'ny mpamokatra toekarena japoney.
Ankoatr'izay, ny fanitarana ny Terminal 2 ao amin'ny seranam-piaramanidina Haneda dia natao ampahany mba hananana ny fahafaha-manafika amin'ny fitsidihana iraisam-pirenena izay noforonin'ny Lalao Olaimpika. Ny terminal 2 dia teto an-toerana ihany. Na izany aza, nanana ny ampahany tamin'ny terminal niovany izy ary nanitatra mba handraisana vavahady iraisampirenena. Tamin'ny taona 2020, namoaka efitrano fatoriana vaovao telo ny ANA satria namindra ny ankamaroan'ny asany iraisam-pirenena ho any Terminal 2.
Ity fiovana avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra ao Japon ity dia mampiseho ny fomba hanitarana ity fizahan-tany ity, izay natao indrindra ho an'ny Lalao Olaimpika, amin'ny fizahan-tany amin'ny taona ho avy, ary manampy efitrano fatoriana lehibe kokoa sy vaovao, izay hampiakatra ny fandaniana fizahan-tany ary hanatsara ny traikefa fizahan-tany.
Ny haavon'ny fitsidiham-pirazanana mialoha ny areti-mandringana any Japon dia tombanana fa tazonina amin'ny 2022, avy eo ny fitomboana dia antenaina hitombo amin'ny 6.3% ny taha fitomboan'ny fitomboana (CAGR) hatramin'ny 2021 ka hatramin'ny 2024. Ny fitsidihana miditra dia antenaina hahatratra ny ambaratonga mialoha ny pandemika amin'ny 2024, izay tara be lavitra noho ny fizahan-tany any an-toerana. Na izany aza, ny fidiran'ny miditra dia mety hitombo aorian'ny taona 2024 ary ny fanatsarana ny toerana ahatongavana, miaraka amin'ny fahaiza-manao, dia ilaina mba hanamorana ny fitomboan'ny ho avy amin'ny tsena iraisam-pirenena. Miaraka amin'ireo fanatsarana ireo efa vita ho an'ny Lalao Olaimpika dia hanana toerana voalohany i Japon hisambotra ireo mody an-trano mody, fa ny tena zava-dehibe dia ny fangatahana iraisampirenena taorian'ny nitrangan'ny Lalao Olaimpika.
Fampivoarana ireo fotodrafitrasa fanatanjahan-tena kilasy eran-tany amin'ny hetsika ho avy
Japana izao dia manana karazan-jery maoderina fanatanjahan-tena maneran-tany mba hikarakarana hetsika fanatanjahan-tena amin'ny ho avy, izay midika fa azo avotana amin'ny ho avy ny fatiantoka amin'ny Lalao Olaimpika. Rehefa mangataka hetsika amin'ny ho avy dia hohamafisina miaraka amin'ireo fotodrafitrasa vaovao ireo ny raharaha Japon. Ireo tolo-kevitra ireo dia mety ho amin'ny endrika hetsika malaza amin'ny fanatanjahan-tena marobe, na amin'ny endrika hetsika fanatanjahantena tokana. Na inona na inona karazana karazana fanatanjahan-tena, dia afaka mametraka azy ho toerana iray lehibe hijerena ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany amin'ny fizarana fanatanjahantena i Japon ankehitriny.